Inzwa zvandakazosanga nazvo pamarondera ndichibva kwamutare – VanodaZvinhu
Mmmm iyo yangu iyi ini sexmore yekurova matrip kuenda joburg ndichinotora maorder chinotove chigariro musoro weshuro kushaya nyanga.
Yaitove svondo ndiri muharare apo ndaive neorder dzaienda mamutare nekunyazura.. so ndakapurana kuti ndinotanga kunosiya zvekwamutare then ndouya ndichipfuura ndichidropper zvepanyazura.
Ndakakwira bus sevamwewo..as usual takasvika mwamutare ndokuhire mota ndichinosiya fridge yevanhu….kwange kwave kumapast two had to come ndichidropper mablankets munyazura..pasina time ndakasvika many at uranium kwakusiya zvinhu zviye..
It was getting late ndakaenda pahiking spot.. problem transport to harare yange yapera kunge hondo yemiseve ..ndakamira asi hapana chakauya ndakabva ndagaya kumbonoti rimwe ndofuratira ndopakazosvika imwe mhemba nekarori kerudzi rwe T35 ndikati harare vakuru zvikanzi handei bt handinyanye kumhanya, if u dnt mind.
Takapfuura mitunhu chichienda nespeed yengoro iri kukakatwa nemahachi…takapfuura rusape chichinanaira…ko ndaimhanyirei zvangu coz guta reharare ndomandaizoda kupfuurira kuenda tipperarys kumaavenues.
Nenguva isipi ndakanzwa change down yekarori kaye nekuti ndainge ndakupota ndichibatirwa nehope…nechekumberi kwedu kwaive nemhandara yaive yakapenda muromo. Yaita kunge muti wakapazurwa matavi yakati twi kumira. Bvudzi racho iyo miswe yemabhiza iyi aibva aita kunge njuzu.ainge akapfeka zvitema kubva kumusoro kusvika zasi kunge ngirozi yasatan
Kuzoti tsiye haiwa kunge dzechikwambo .zvaitoratidza kuti ihure nekuti zigumu shangu yemahure rainge rakarohwa haiwa iwa…aimisa chirori. Pfungwa dzangu dzakatanga kuita hondo zvekuti imwe yaiti ndozvipoko zvinotaurwa ..imwe ikati chitotaura naye apinda unorara uchitsemura nyini. Imwe hapana zvayaifunga yainge yakatonhora.
“City..!!!” Rakadaidzira nepawindow neinzwi rine zhowe zhowe….zvikanzi “correct”..nadriver zvikanzi,” bt andina mari”. Aaaaah zvakazonzwikwa nani ini ndainge ndatomira mboro kare ndichiburuka kuti shiri yerudo iyende pakati.nyaya dzakatsva bt ini ndainge ndatofenda kare…
Mboro yainge yave mupinyi …mudumbu ndakutonzwa manyoka ..hana yainge yatononokerwa ..nenguva isipi isu nyengu mucity nguva yainge yanguvaira saka vanhu aive maone one. Ndakakumbira kuburutswa patotal muna samora machel ..sezvinei sisi vaye vakabva vati vakuburukawo sezvo vaida kuenda kuchitungwiza plus vakange vakunyebera kutya rima
Ndakataura navo kuti vaibvepi vakabva vananga panyaya kwete zvekurova beche murima uchiviga mboro.vakati kumarondera vainge vashaya customer kana imwe zvayo so mari yemuchovha aive maone…so ndakabva ndati dzawira pamubhedha dzisina bhurugwa hadzichanetsi kusvira.
Takaenda paseri pedoves iri muna harare here handichanyatsoketa bt paive nedehwemukumbu werima zvekuti tose taitya porisi instead of matsotsi…ndakasviko mubata mazamo zvechiriki riki nekubeche zvekutya… akanditi hooo nditange ndamupa pondo yatange tawirirana…ndakangovhomora handizivi kuti yaive pondo yoga here coz pfungwa dzangu dzainge dzataika nekuda beche.
Takange tofemera pamusoro tose coz zvaiti chando nekunzwa kwariti time yakange yoda kuuya.ndakaita zvekukurura zvenharo jean zvese nepant and I could hear iye achiti.take it easy kani.. ndiye akavhura condom coz aifamba nawo ndokukupfekedza tom bhobho wangu ainge zvino amira kunge tower light.
Akabva akotama ini ndiye pfeee kubeche rainge raita kunge sora rine dova…ndakanzwa kushinyira ndikati rainzwawo hure iri…zviya zvokuti mahure ajaira mboro heee unosvira rakatarira divi nhema idzo…ini iri mucondom ndononoka kutunda …ndakarikoira hure iri kunge munhu akuchovha bhasikoro. Apa ndainge ndakuitira mari yangu , hama dzadiwa rakazama kuda kundibatirira asi zvakashaya basa.
Ndakaramba ndichimudhonzera pedyo neni now ndainzwa kuti pane kanhu kandiri kugunzva ..aibva anyanyisa kuchemerera..achishinyira kunge radio yanzvenga panzvimbo.hama kutaurirwa hunyimwa kunge mbare dzekumudhidhi..beche rainaka samare irori… ndakakoira ne every angle ndakatozomubata oda kupfugama apa mabhonzo akurira zvikanzi maiwiiiiiiiii aaaaaaahh …nekachisuri kakafuridza mavhere or choya changu kuita sechichadzurika
Kutunda kaaa uko ndakabva ndaona kuti kangoma koririsa koda kudhuuka….mwana akanyanya kusura oda kumama and missed call yeduzvi kusura …ndakazozvimanikidza ndikanzwa msana uchikakata zasi kwejende kuchitekenyedze kunge chana chiri kudya mbwire mbwire.ndakabva ndatundawo.
Ndakaita time ndokuzobvisa condom handina kuwana time yekupukuta ndakavhara zip.iye achipfekawo ..akabva atanga ngano kuti.matax apera saka aikumbira kuenda neni kumba then ofuma achienda …izvo ndozvainetsa sekusvira mukadzi wamanager..
Takazongoparadzana bt ndakaona kuti kamusviriro kandainge ndaita kakakorongonya joki iri…nanhasi ndinogaro funga kamusviriro ikaka..nakirwai amana esp muri parwendo. Mirirai part 3 yekukwira zve bby muguard room ndichishanda ku agri foods
by DrSviro · Published February 2, 2016
by DrSviro · Published April 2, 2015
Next story Kusvira kwandakaita mukadzi wemunhu muChikomo, musango
Previous story Kukwesha Zidhafudhunda!